Na-echegharị, taa, ma ị dị njikere ịsị "Ee" nye Chineke | Ilblogdellafede
Na-eche echiche taa ma ị dị njikere ịsị "Ee" na Chineke
"Onye obula nke choro iso m gha aghaghi iju onwe ya, bulie obe ya ma soro m." Matiu 16:24
Enwere okwu dị ezigbo mkpa na nkwupụta a site na Jizọs .Ọ bụ okwu a "ga-enwerịrị". Rịba ama na Jizọs asịghị na ụfọdụ n'ime unu ga-eso m n’obe obe gị. Ee e, o kwuru na onye ọ bụla chọrọ iso m ga-…
Yabụ, ajụjụ nke mbụ kwesiri ịdị mfe ọzịza. You chọrọ iso Jizọs? N’isi anyị, ọ bụ ajụjụ dị mfe. Ee, anyị nwere. Mana nke a abụghị ajụjụ anyị nwere ike iji isi anyị zaa. Ekwesiri ịza ya site na nhọrọ anyị ime ihe Jizọs kwuru na ọ dị mkpa. Nke ahụ bụ, ịchọ iso Jizọs pụtara ịgọnahụ onwe gị ma bulie obe gị. Hmmm, ị chọrọ iso ya?
Ka anyị chee na azịza ya bụ "Ee". Anyị nwere olile anya na anyị ekpebiela ịnabata ihe niile metụtara iso Jizọs mana ọ bụghị obere nkwa. Mgbe ụfọdụ, anyị daba n'ọnyà nzuzu nke iche na anyị nwere ike "iso ntakịrị" soro Ya ebe a na ugbua na ihe niile ga-adị mma ma anyị ga-abanye Eluigwe mgbe anyị nwụrụ. Eleghi anya nke ahụ bụ eziokwu, mana ọ bụrụ na nke ahụ bụ echiche anyị, yabụ na anyị amaghị ihe ndụ bụ, na ihe niile Chineke debeere anyị.
Yourselfgọnarị onwe gị ma bulie obe gị bụ ndụ dị ebube karịa nke anyị nwere ike ịchepụta n'onwe anyị. Ọ bụ ndụ gọziri agọzi na ụzọ naanị iji nweta mmezu ikpeazụ na ndụ. O nweghi ihe dị mma karịa ịbanye na ndụ nke ịchụ onwe onye kpamkpam site na ịnwụ ọnwụ.
Na-atụgharị uche taa ma ị dị njikere ịsị "Ee" n'ajụjụ a, ọ bụghị naanị isi gị, kamakwa na ndụ gị niile. You nwere njikere ịnabata ndụ ịchụ-aja nke Jizọs na-akpọ gị ka ị nabata? Kedu ka o siri dị na ndụ gị? Kwuo "Ee" taa, echi na ụbọchị niile site n'omume gị, ị ga-ahụkwa ihe dị ebube na-eme na ndụ gị.
Onyenwe m, achọrọ m iso gị ma m họrọ, taa, ịgọnahụ ịchọ ọdịmma onwe m naanị. Ahọrọ m ibu obe nke ndụ achọghị ọdịmma onwe onye nanị nke akpọrọ m. Enwere m ike ị were ọ embraụ nabata obe m ma jiri ịbụ onye a gbanwere. Jesus m kwere na gị.
← Na post gara aga Gara aga post:Kedu ihe kpatara ụmụaka ji anwụ? Akụkọ banyere ndị mmụọ ozi siri ike
Ọzọ Post → Post ozo:Vozo Etu nke ụbọchị: Providence Chineke